Maxuu ahaa u jeedka kulankii dhex maray Axmed Madoobe, Sheekh Shariif iyo Shariif Xasan? – Hornafrik Media Network
By Liibaan Nuur	 Last updated Dec 14, 2019
Magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya xalay waxaa kulan ku yeeshay wafdi uu hoggaaminayo guddoomiyaha Madasha Xisbiyada Qaran Shariif Sheekh Axmed, Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe iyo mas’uuliyiin kale.
Qoraal ka soo baxay xisbiga Himilo Qaran ayaa lagu sheegay in kulankaasi uu ka dhacay hoyga magaalada Nairobi uu ka deganyahay Shariif Sheekh, halkaas oo uu ku booqday madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe).
Kulanaka ayaa waxaa la sheegay in looga hadlayey xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo suurta galnimada in doorasho lagu wada qanacsanyahay ay dalka ka dhacdo sanadka 2020/2021-ka.
Kulanka ayaa xubnaha Xisbiga Himilo Qaran hogaamiyaha xisbiga Sheekh Shariif waxaa ku wehliyey Senator Ilyaas Cali Xassan oo ah xoghayaha Arrimaha dibadda ee Xisbiga Himilo Qaran iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan, oo hadda ah guddoomiyaha xisbiga Horusocod Qaran.
Shariif Sheekh iyo Axmed Madoobe ayaa isku siyaasad ka ah xaaladda dalka ee iminka, iyaga oo ka soo horjeeda qaabka ay dowladda wax u waddo.
Kenya oo gacanta ku dhigtay xubno doonayey inay ku biiraan Al-Shabaab